Akụkọ Gold - Mụta ahia 2
521323 Ndị otu
Nweta VIP SIGNALS
FX Akụkọ Nri
Akụkọ EUR / USD
Ihe ngosi Forex kacha mma
Best Free Signals Forex Telegram Otu 2021
Akaụntụ Akaụntụ Forex
Ịzụ ahịa Forex
Obere Akaụntụ Micro & Micro
Atụmatụ Forex Trading
Forex ígwè ọrụ na-
Jikwaa Akaụntụ Forex
Akaụntụ PAMM ejiri
Ihe mgbaàmà Crypto
Muta otu esi ahia ahia
Muta otu esi ahia Bitcoin
Kachasị Free Crypto Signals Telegram Groups 2021
Ngwaahịa ahia ahia kacha mma
Zụrụ Bitcoin Na Ebe E Si Nweta Kaadị
Zụrụ Bitcoin Na Debit Kaadị
Nchịkọta Bitcoin Cloud
Nyocha Circuit Bitcoin
Nyocha Nyocha Bitcoin
Nyocha Bitcoin Prime
Mụta ahia Forex
Kedu ihe bụ Forex Market
Mụta ịzụ ahịa
Mụta ahia ụbọchị
Atụmatụ ahia ahia ụbọchị
Mụta azụmaahịa Ahịa Ahịa
Gịnị bụ Forex Pips
Mụta ịkụ azụ
Otu esi eji ego
Otu esi ejikwa mgbasa gị
Etu esi ahịa ahia
Esi Ego Dị mkpụmkpụ
Etu esi eji oke eme ihe mgbe ahia
Ngwongwo ahia kacha mma
Ihe omuma ahia kacha mma
Akpaghị aka Detuo ahia anyị na eToro
Ngwa ahia ahia kachasị mma
Akaụntụ UK Trading
Gbasa ịkụ nzọ
Ahịa Ahịa Ahịa PDF
Penny Stock dingzụ ahịa
Ndi ahia ahia Forex
Akaụntụ Islam Trading
Ndị ahịa kachasị mma na eToro
Ndi ahia ahia
Islamic Forex Broka
Ndị na-ere ọla edo
Ndị Na-ere Mmanụ
Ndị na-ere ahịa Crypto
Best ASIC Broka
Kacha mma CFTC Broka
Best CySEC Broka
Kacha mma FCA Broka
Kacha mma SEBI Broka
Nyocha Ahịa Worldwa
Gold remains bearish below 1760
Key resistance: 1760 Key Support: 1732 – 1717 Long Term View Gold has been under pressure since it failed to regain the 2000 level with the DXY unable to move lower. Gold is down 12.50% this year from its January 5th highs and is now trading below a massive key level (May 2020 highs and […]
Tọzdee, Febụwarị 25, 2021
Ọnụ Ahịa: Bikwụ Na-adịghị Mma Softens na XAUUSD N'okpuru $ 1800 Ọkwa N'etiti Pịkụl na US Bond Amịrị
XAUUSD Ọnụahịa Ahịa - February 25 Gold (XAUUSD) na-aga n'ihu na-agbasi mbọ ike ịnọ na-ere nrụgide n'ime oke ala dị n'okpuru ọkwa $ 1800 site na etiti European. Ndị otu XAUUSD gbanwere ndịda na mbido azụmaahịa mbụ nke Tọzdee ma gbadata ala $ 1787. Obere nnara nnara na US Treasury bond […]
Tọzdee, Febụwarị 18, 2021
Gold Bearish Na-aga n'ihu
Ogologo Ogologo Oge Na Gold Gold agbaala agba na mbụ na 1785 ma ugbu a na-enyocha ma jụ ha. Nke a bụ ohere dị mkpirikpi maka njegharị ụbọchị. Echiche kwa ụbọchị na Gold A na-ekpuchi ihu elu nke ọla edo site na njikwa akara nke taa (POC) na VWAP (Mpịakọta Nkezi Arọ Nke Mpịakọta). Ndị a 2 ngwá confluence […]
Gold na-anwale ala nke ogologo oge
Nkwado igodo: 1785 - 1780 Nguzogide isi: 1795-1814 Gold ogologo oge bullish Ebe ọ bụ na ọrịa a kụrụ Gold agbakọtara 42.88% site na ala ruo elu nke mbugharị ma weghachite -15.40% site na elu na ọkwa dị elu. Eke ekedep ka nọ na-egwu egwu dị ka Central Banks na-ha akpan owo ịzụta mmemme niile na oge highs […]
Dollar laghachi na ịrị elu US Mkpụrụ, Gold Falls Dị ka German Zew na-eme Euro
Dollar na-alaghachi azụ taa, nke kpalitere site na ịrị elu mkpụrụ US. E wezụga nke ahụ, dollar ahụ na-ekwusi ike karịa ọnụ ọgụgụ ndị a na-atụ anya ya. Ọ bụ ezie na ebuka ndị Europe nọ na oke, ọdịnihu US mepere elu. Yen bụ ugbu a kacha njọ, ndị Australia na ndị Canada sochiri ya. N'ozuzu, ọ na-anọgide na-hụrụ ma ọ bụrụ na dollar ga- […]
Nyocha Ahịa ọla edo - February 10
Gold (XAU / USD) rịrị elu na mbido European n'oge Wenesde, dịka dollar US na-esighi ike (DXY) na atụmanya nke mgbakwunye mkpali ego nke US kwalitere ọchịchọ maka ọla edo. President Joe Biden si chọrọ $ 1.9 puku ijeri ihe mkpali ngwugwu aka iso na-enwe ọganihu dị ukwuu, dị ka Biden kwetara na Tuesday na-arụ ọrụ na a amaghị si […]
Gold mgbanwe na play
Mgbe emechara 3.5% Gold kụrụ otu ọkwa dị elu ma bipụta ala dị elu. Anyị ka na-azụ ahịa n'ime usoro ihe owuwu ogologo oge. Na 1845 larịị ojuju ga-eweta bearish nrụgide na breakout nke nloghachi ụkpụrụ Broker Uru Min ego ego Gaa Broker karịrị 100 dị iche iche ego na ngwaahịa itinye ego si dị ka […]
Mọnde, Febụwarị 8, 2021
Nyocha Ahịa ọla edo - February 8
Gold (XAU / USD) gbanwere n'akụkụ dị n'akụkụ site na mbido European n'oge Mọnde n'etiti nkwụsi ike $ 1819 na nkwado $ 1808. Ngwongwo odo na-egosi na ọ dọtara ụfọdụ ndị na-azụ ahịa n'ime awa ole na ole gara aga ma nwee ike ịmalite na mgbake nke Friday site na nkwụsị ọ na-adịbeghị anya na ọnwa abụọ dị ala. Otú ọ dị, uptick kọrọ […]
Nyocha Ahịa ọla edo - February 3
Gold (XAU / USD) gbalịsiri ike ịkwagide ọfụma ya site na ụnyaahụ ma weghachite ala ya kwa ụbọchị nke ihe dịka $ 1832 na mmalite European nnọkọ na Wednesde. Ọnọdụ ahịa dị ize ndụ na ọnọdụ ahịa bụ ọkachasị maka ụkọ ihe a na-achọ gburugburu ọla edo, nke mere ka ọ nweta uru ọzọ maka ya. Ọzọkwa, nnara na US Akụ […]
Mọnde, Febụwarị 1, 2021
Akwụsịla Ahịa ọlaedo n'agbanyeghị oke mgbako na Silver
Gold (XAU / USD) gbanwere n'echiche siri ike site na etiti European na Mọnde, ka ndị na-etinye ego na-agba ọsọ na nnukwu uru na ọlaọcha (XAG / USD). Agbanyeghị, ọla edo nọgidere naanị n'ime izu gara aga n'azụ izu dị mma na dollar US, nke na-emebi ọchịchọ maka ngwaahịa ọnụahịa dollar. Gold nọgidere nso-agbụ maka […]
Ndị isi FX Forex News & Strategies
Niile I Kwesịrị na Forex News Platform
Mụta ahia 2 bụ saịtị ezubere iji kwadebe ndị ahịa na ndị na-etinye ego na eziokwu na nkọwa achọrọ iji bụrụ onye nwere ihe ịga nke ọma na ụwa azụmaahịa. Iji nwee ihe ịga nke ọma na ngalaba azụmaahịa ego, mmadụ kwesiri inwe nghọta miri emi banyere ahịa ego n'ọtụtụ ebe.
N'ebe a Mụọ 2 Trade, anyị nwere otu ndị ọkachamara nwere ahụmịhe ahịa gbasara ahịa ahịa niile dị ka mkpuchi, ngwa ahịa, ego na indices ndị chọrọ inye ndị na-azụ ahịa na ndị na-azụ ahịa ahịa azụmaahịa ọkachamara banyere isi ahịa na ahịa ahịa. Otu dị n'azụ Mụta 2 Trade maara nke ọma ihe onye na-ere ahịa Forex pụtara, nke ga-enyere ndị ọrụ anyị aka inweta ihe ịga nke ọma na ụwa azụmaahịa ego. Na, anyị na-ewere ya dị ka ọrụ anyị inye gị ndụmọdụ ọkachamara ga-enyere gị aka ime mkpebi ọ bụla.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na i sonyeere ahịa Forex ma ọ bụ ọ bụrụ na ị maara ụwa azụmaahịa, ị ga-erite uru site na ndụmọdụ anyị ga-enyere gị aka ịme mkpebi na-enweghị nsogbu.
Ihe niile FX, 24/5
Anyị na-eburu ibu ọrụ nke ịnye gị ndụmọdụ ọkachamara kachasị mma iji mee ka usoro nke ịhọrọ onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị ga-adị mfe karị ma nwee nnukwu nsogbu. Anyị na-etinye ihe ọmụma anyị, ahụmịhe, na nka anyị ahịa ahịa maka uru gị; iji nye gị ahụmịhe na-enweghị nsogbu mgbe a bịara n'ịkọle na nyochaa nke ọ bụla n'ime ndị na-ere ahịa Forex iji nyere gị aka inweta ume na azụmaahịa gị, n'otu oge na-enyere gị aka izere mmejọ ọ bụla nke ga-efu gị ogwe aka ma ọ bụ ụkwụ n'akụkụ na-enye gị ozi ọhụụ FX kachasị ọhụrụ.
Onye edemede: Michael Fasogbon
Banyere chepụtara: Michael Fasogbon
Emelitere ikpeazụ: November 14th, 2019
Michael Fasogbon bụ ọkachamara na-azụ ahịa Forex na onye nyocha nyocha cryptocurrency na ihe karịrị afọ ise nke ahụmịhe ahịa. Afọ ole na ole gara aga, ọ bịara nwee mmasị na teknụzụ blockchain na cryptocurrency site na nwanne ya nwanyị ma kemgbe ọ na-agbaso usoro ahịa.
Echefula Azụ Ọzọ
Ngosipụta oge mgbaama oge ọ bụla mepere mgbaàmà, mechie ma ọ bụ emelitere
Ntinye ngwa ngwa na email gị na ekwentị mkpanaaka gị.
Ntinye Ọkwa Ntinye
Ntinye ọnụahịa ntinye maka akara ọ bụla Naanị họrọ otu n'ime Top Broka anyị na ndepụta ahụ iji nweta ihe a niile n'efu.
GBP / USB Buy
Azụmaahịa Ugbu a
Bido FREE nweta akara ngosi ugbu a!
Ọ ga-amasị m ịnweta mmelite ahịa, nkwalite pụrụ iche na akwụkwọ akụkọ. Agụla m, ghọta ma nabata usoro na ọnọdụ na amụma nzuzo.
Ihe ngosi Forex kacha mma 2021
Otu esi eji Forex Signals
Usoro Forex Trading
Ndụ Forex & Chaatị
Forex n'ókè Telegram
Nduzi Forex Brokas
Esi họrọ otu Broka
Telegram mgbaàmà Crypto
Mụọ 2 Trade bụ aha azụmaahịa nke Gadget Geek Online Ltd
20-22 Wenlock Road, London N1 7GU Aha Companylọ Ọrụ Ndebanye aha: 11746374
Ozi ọ bụla, ozi, echiche, eserese, ọnụahịa, nyocha, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ na weebụsaịtị a ekwesịghị iwere dị ka ndụmọdụ ntinye ego mana enyere ha ozi zuru oke maka ntụrụndụ na ebumnuche mmụta. E kwesịghị ịdabere na saịtị ahụ kpamkpam maka nyocha sara mbara tupu ịme mkpebi azụmaahịa onwe onye. Ọdịnaya ọ bụla na weebụsaịtị a nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa. Mụọ 2 Azụmaahịa agaghị anabata ụgwọ maka mmebi, mmebi, ma ọ bụ uru ọ bụla n'ihi ojiji ma ọ bụ ịdabere na ozi dị otú ahụ ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi. Anyị anaghị akwado naanị iji nyocha nyocha maka ịme mkpebi azụmaahịa. Anyị anaghịkwa akwado mkpebi ịme ngwa ngwa. Ghọta mgbe niile na arụmọrụ gara aga anaghị ekwe nkwa nsonaazụ n'ọdịnihu.
Copyright © 2021 Mụọ 2 ahia
Nweta ụbọchị 365 nke akara ngosi Forex na-akwụghị ụgwọ mgbe ị na-etinye 100 USD na akaụntụ 0% Commission CedarFX!
Debanye aha na CedarNkwụnye ego $ 100 na Cedar iji nweta ihe nrịba ama Forex VIP n'efu maka Afọ 1! Ahịa na MT4 na ntinye ego ruo 500: 1